Chọpụta ụfọdụ n'ime ntutu dị mma maka ntutu dị mma | Bezzia
Susana Garcia | 02/05/2021 20:00 | Mma, Ylesdị edozi isi
El ezi ntutu na-enwekarị ọtụtụ nsogbu na otu n’ime ha bụ na o nweghị nnukwu olu. Mgbe nke a mere, ihe anyị na-anwa ime bụ ime ka ọ dịkwuo ụba ma nwekwaa ụba, nwekwuo ndụ. Ọ bụ ya mere e ji nwee ụfọdụ edozi isi na nkwụsị nwere ike inyere gị aka ịmepụta ụdị ahụ na ntutu gị nke na-eme ka ị chefuo na ọ dị mma ma ọ bụghị nnukwu ntutu. Enwere ụfọdụ edozi isi nke ị ga - eme ka ntutu gị dị mma.
na ndị nwere ntutu dị mma kwesịrị ilekọta ya anya nke ọma ma chee maka otu esi eme ya ka o we nye gi otutu ma di mma. Na mgbakwunye na nlekọta ngwaahịa, ọ bụ eziokwu na ọdịdị ahụ na-adaberekwa n'otú anyị si edozi ntutu anyị, ebe anyị nwere ike ịmepụta ụdị dị iche.
1 Adịcha midi mane
2 Amaja na pixie
3 Tousled-mmetụta ikpa isi
4 Bob na ebili mmiri
5 Ezi nlekọta ntutu
Adịcha midi mane
Ọbụna ntutu nwere ike inyere gị aka ịmepụta ntutu dị mma ma ọ bụrụ na ntutu gị dị mma. Nke a bụ otu n'ime nhọrọ ndị a na-ahụkarị, ebe ọ bụ na a kpụchara ntutu isi, ị ga-enwe mmetụta na ọ bara ụba karịa ma ọ bụrụ na ị belata ya na akwa, ebe ọ bụ na ndị a na-ebelata olu. Na Midi ntutu na-eyi akwa ma bụrụ ụdị ntutu nke nwere ike idozi mfe. Ọ na-enye anyị nnukwu ntụgharị n'ihi na anyị nwere ike iji ngwa ntutu ma mee edozi isi ma ọ bụ yikwasị ya. Ọ bụkwa otu n'ime ụdị ejiji ejiji nke oge a, yabụ na ị gaghị akwụsị iyi ya. Can nwere ike inye ya ụfọdụ olu ma ọ bụ ebili mmiri ma nke a ga-eme ka ọ nwekwuo olu na-acha ọkụ, na-edochi ntutu dị mma.
Amaja na pixie
Pixie ịkpụ ntutu bụkwa oke nhọrọ. Pixie bụ obere ntutu dị mkpụmkpụ mana ọ dị mma n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla, nwere ụdị ntutu niile. Ihe pixie ahụ dị mfe nghọta ma na-enyere anyị aka ịnwe ọhụhụ nke oge a na nke na-emebi emebi, ọ bụ ezie na ọ dị egwu ma ọ bụghị mmadụ niile nwere mmasị iyi ntutu isi ha. O zuru oke ma ọ bụrụ na ị nwekwara ntutu dị ogologo ka ọ gaghị agagharị.
Tousled-mmetụta ikpa isi
Ọzọ nke edozi isi na anyị nwere ike ime ma ọ bụrụ na anyị nwere ezi na ogologo ntutu bụ ike otu n'ime ndị na edozi isi nwere ụfọdụ imetụ aka n'ihi na ọ na-enye ha olu. N'okwu a anyị na-ekwu maka ịkpa isi. Ọ bụrụ na anyị mee ka ọ bụrụ nke ukwuu, ntutu dị mma ga-ahụ anya, mana ọ bụrụ na anyị ọgbaghara elu ntakịrị mmetụta ga-adị iche. Ọ dị mfe karị ịhụ otu ntutu si enwe olu ma ọ bụrụ na a kpatụ braid ahụ ntakịrị, yabụ ọ bụ mmetụta na-erite ụdị ntutu a uru.
Bob na ebili mmiri
El ezi ntutu kwesiri ka emezi ya na ebili mmiri, ebe ọ bụ na ọ bụrụ na anyị agbatị ya kpamkpam anyị ga-eme ka ọ dị mma nke ukwuu. Emeela ka ịkpụ bob dị mkpụmkpụ ma eyi akwa mkpụmkpụ ma dị nkenke. Gbakwunye ụfọdụ ebili mmiri na ntutu a bụ ezigbo echiche dịka ọ na-enye ya ọtụtụ mmegharị na ụdị.
Ezi nlekọta ntutu
Iji lekọta ma dezie ntutu dị mma, anyị ga-eburu n'uche ihe ụfọdụ. Otu n’ime ha bụ na ọ ka mma gbanye ntutu ma jiri ya gbaa ya gburugburu wee fụchaa yar, kamakwa iji ngwaọrụ iji mee ebili mmiri n'ụzọ dị mfe. Zere ndị na-edozi ntutu isi nke na-edozi ntutu gị kpamkpam, dịka ọ ga-adị ka obere olu. A ghakwara ilekọta ntutu a n'ihi na ọ na-agbaji ngwa ngwa, ya mere a ga-eji nlezianya kpochapụ ya na ezigbo bristle brushes. Ọ bụrụ na anyị eyi ya mkpụmkpụ, ọ na-agbacha agbacha, mana ọ bụrụ na ọ toro ogologo, anyị ga-anwa ịtọpụ ya site na nsọtụ ka ị ghara imebi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Nghazi ntutu maka ntutu dị mma